Mepụta otu netwọkụ mmekọrịta gị na GROU.PS
Mmelite: Ọ na-egosi na akụkọ dị mkpa banyere nsogbu a kọrọ maka GROU.PS. Ekele dịrị otu n’ime ndị na - agụ akwụkwọ anyị maka iwetara m ya.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịmalite netwọkụ niche nke netwọkụ gị maka ndị ahịa ma ọ bụ otu obodo, nhọrọ gị ga-emefu nnukwu ego na mmepe ma ọ bụ ịnwere ike iji ọnụọgụ ntanetị nke netwọkụ dị na ahịa. Nwere ike ibudata ma wụnye ihe eji emeghe mmekọrịta ịkparịta ụka n'Lontanet Lovd Site Naa ma ọ bụ Elgg, ma ọ bụ ịnwere ike iji ngwọta akwadoro dị ka Ingmụ, Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, Nlekọta mmekọrịta or GROU.PS.
GROU.PS bụ ngwanrọ na-elekọta mmadụ na-enye ndị mmadụ ohere ịbịakọta ọnụ ma mepụta obodo ndị nwere mmekọrịta gburugburu otu mmasị ma ọ bụ njikọ. Arụ ọrụ nke ndị otu ọ bụla na-arụ ọrụ na-ejedebe naanị site na nchepụta na ebumnuche ndị otu. A na-eji usoro GROU.PS mepụta ebe dị iche iche nke obodo, gụnyere ọgbakọ egwuregwu egwuregwu n'ịntanetị, ụlọ akwụkwọ ntanetị, klọb ịgba egwu, mkpọsa maka onyinye afọ ofufo, ọha na eze na mahadum, yana ụzọ mbata mmemme.
GROU.PS nwetara ezi nta nke nta afọ ole na ole gara aga mgbe ha wuru onye mbubata Ning. Ning akwagala ugwo ugwo, ya mere GROU.PS meputara usoro di mfe iji webata ihe omume na ihe nile site na Ning gi gaa na netwọk GROU.PS ohuru. GROU.PS nwere ezigbo atụmatụ.
Atụmatụ dị ka edepụtara na GROU.PS Home Page
Mbido ngwa ngwa - Ya mere mfe iji, ị ga-abụ na-agba ọsọ na 5 nkeji. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite ịkpọ ndị mmadụ ka ha sonyere obodo ọhụrụ gị ozugbo.
70 + ndebiri - Anyị nwere ndebiri maka onye ọ bụla. Hazie ụdị ndị otu gị na interface enyi na enyi anyị. Ma ọ bụ, jiri nwayọọ gwuo mmiri na CSS ma nweta nkwado zuru ezu.
15+ ngwa ọdịnala - Usoro ahụ bụ nkwụnye ma kpọọ. Ngwa anyị gụnyere Ọgbakọ, Blọọgụ, Wiki, Foto, vidiyo, Ego, na ndị ọzọ. Jiri ole na ole ịchọrọ, ma ọ bụ ha niile. Ọ dịzịrị gị.
Integrated -Ọgbakọ dị iche iche nwere ike ibipụta ihe ha họọrọ na ihe omume ha na Twitter na Facebook iji nweta oke ngosi na okporo ụzọ.
Ọha ma ọ bụ nkeonwe - can nwere ike ịhapụ ụwa niile ka ị lelee ma tinye aka na otu gị, ma ọ bụ belata ịnweta ole na ole ahọrọ. Mepụta ngwakọta nzuzo nke na-arụ ọrụ maka gị.
Nhazi - decide kpebiri onye nwere ike inye aka, mepụta ma dezie ọdịnaya. Wepụta ọkwa nke ikike maka ndị otu gị.
monetization - ugwu - abụghị sọọsọ ndị otu gị nwere ike iweta. Nwekwara ike iwepụta ego site na iji ngwa anyị, ma ọ bụ bulie ego maka ebumnuche site na iji ngwa Ego emebere. Ree tiketi, mepụta mmemme ndị akwụ ụgwọ, wdg.
API - You're bughi oke na ngwa ndi anyi wuru wuru. Nwere ike iji API anyị iji nweta ngwa ọrụ nke atọ ma tinye ọrụ gị ahaziri iji kwado mkpa gị pụrụ iche.
Nnukwu Nkwado - Ma ọ bụrụ n ’ịchọrọ enyemaka ọ bụla n’uzo, ịnwere ike iru anyị oge ọbụla. Anyị na-etinye aka na ihe ịga nke ọma gị, anyị ga-ewekwa oge dị ka ọ ga-eji mee ka afọ ojuju gị.
Atụmatụ sitere na $ 2.95 kwa ọnwa na $ 29.95 kwa ọnwa!
Tags: mmemme ahiaiche icheotu ndi otuotu mgbasa ozindị na-elekọta mmadụ mgbasa ozielekọta mmadụ na netwọkịkparịta ụka n'networkntanetelekọta mmadụ n'elu ikpo okwu
Jul 30, 2012 na 10:19 PM
Kedu uru nke ịmepụta netwọkụ mmekọrịta dị iche na mpụga nke netwọkụ ndị ejirila? M sonyeere ọtụtụ LinkedIn Groups ma ọ bụ Facebook Groups, ma ọ dịghị mgbe m na-elekọta mmadụ na netwọk.
Kedu uru ndị ahịa na-eji iji usoro dị iche?
Jul 31, 2012 na 1: 24 AM
Ndewo @andrewkkirk: disqus! Imirikiti netwọkụ ndị ahụ dị ugbu a bụ nke a kpaara ókè na nhọrọ ha nwere ike inye obodo gị… cheta, ha lekwasịrị anya na ego nke aka ha - ọ bụghị obodo gị Ọ bụrụ na ị nwere obodo mmepe, dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnweta nchekwa koodu, ọbá akwụkwọ vidiyo na ọtụtụ ihe mgbakwunye ndị ọzọ ị na-enweghị ike ịbanye na otu ndị a. N'èzí azụmahịa, m na-elekọta obodo http://www.navyvets.com na ikpo okwu na-enye anyị ohere 'ị nweta' ọdịnaya ahụ, nweta dollar mgbasa ozi, ma anyị na-agbanwe ugbu a na-abụghị uru. Enweghị m ike ịrụzu nke ahụ na otu otu jikọrọ ọnụ!
Jul 31, 2012 na 11: 49 AM
@douglaskarr: disqus Nnukwu nzaghachi. Ọtụtụ echiche dị ukwuu nke m na-ahụghị ma ọ bụ ghọta ya na mbido. Daalụ!
Ndekọ Ndekọ Worldwa ™
Sep 1, 2013 na 11:00 PM
Afọ a bụ 2013. Soro ụlọ ọrụ a na-eme njem mgbe ọ na-abịa maka ọrụ ndị ahịa na nsogbu ịgba ụgwọ. Enweghị nọmba ekwentị iji jeere ndị nlekọta ha ozi. Ka njikọ a kwuo maka onwe ya. Ripoff Akuko http://www.ripoffreport.com/reports/search/grou.ps
Sep 1, 2013 na 11:04 PM
Chei - daalụ maka ozi ahụ!
Sep 1, 2013 na 11:23 PM
Daalụ maka ikenye. Obi ga-adị RT gị ụtọ na twitter :)